Xulka barafka iyo barafka barafka ULLER - THE INDIAN FACE
Ii sheeg sida aad wax u tababarto waxaanan kuu sheegi doonaa sida aad u tartamayso
UllerIs Waa nooc tayo sare leh oo heer sare ah oo ay soo bandhigeen oo loogu talagalay ciyaartoy caan ah. Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa lagu abuuray khibrad ay leeyihiin ciyaartoy waxqabad sare leh oo uur yeelanaya baahidooda alaabooyinkeenna kuwanna waxaa loo abuuray inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha. Wax soo saarka ayaa la tijaabiyaa iyaga oo u qaadaya heerka ugu sarreeya ee walbahaarka si loo hubiyo inay la kulmi doonaan waxyaabaha laga filayo inta lagu jiro isticmaalka xirfadda iyo hiwaayadda cayaaraha hiwaayadda.
MASASKA LAGU LEEYAHAY LAGA SOO SAARAY IN LAGU SAMEEYO MAGNETOOYINKA X-POLAR
Gidaarka Buluugga / Casaanka
Gidaarka Buluugga / Casaanka 225.00 €
Gidaarka Caddaan / Madow
Gidaarka Caddaan / Madow 225.00 €
Gidaarka Casaanka / Madowga
Gidaarka Casaanka / Madowga 225.00 €
Gidaarka Madoow / Liinta
Gidaarka Madoow / Liinta 225.00 €
Gidaarka Madow / Muraayadda
Gidaarka Madow / Muraayadda 225.00 €
Snowdrift Green / Madow
Snowdrift Green / Madow 225.00 €
Snowdrift Cadaan / Casaan
Snowdrift Cadaan / Casaan 225.00 €
Snowdrift Blue / Dahab
Snowdrift Blue / Dahab 225.00 €
Snowdrift Madow / Buluug
Snowdrift Madow / Buluug 225.00 €
Snowdrift Madow / Jaale
Snowdrift Madow / Jaale 225.00 €
MASASKA OO LAGU LEEYAHAY LAYNIJIYADO FAROOLO AH X-POLAR
Avalanche Cawlan / Madoow
Avalanche Cawlan / Madoow 225.00 €
Avalanche Cagaar / Madow
Avalanche Cagaar / Madow 225.00 €
Avalanche Madow / Madow
Avalanche Madow / Madow 225.00 €
Avalanche Buluug / Madoow
Avalanche Buluug / Madoow 225.00 €
Vertical Cadaan / Madow
Vertical Cadaan / Madow 134.99 € 225.00 €
Vertical Casaan / Madow
Vertical Casaan / Madow 134.99 € 225.00 €
DADKA LAYSKA MASKAXSAN X-POLAR
Cornice Madow / Madow
Cornice Madow / Madow 185.00 €
Cornice Gray / Cherry 185.00 €
Cornice Cadaan / Dahab
Cornice Cadaan / Dahab 185.00 €
Cornice Blue / Black 185.00 €
Cornice Rose / Madow
Cornice Rose / Madow 185.00 €
Cornice Jaale / Madow
Cornice Jaale / Madow 185.00 €
Cornice Madow / Buluug
Cornice Madow / Buluug 185.00 €
Cornice Madow / Muraayad
Cornice Madow / Muraayad 185.00 €
Duufaanta Madow / Casaan
Duufaanta Madow / Casaan 120.00 €
Blizzard Green / Muraayad
Blizzard Green / Muraayad 120.00 €
Duufaanta Madow / Cherry
Duufaanta Madow / Cherry 120.00 €
Cirfiidka Gray / Casaan
Cirfiidka Gray / Casaan 120.00 €
Bilisad cad / Dahab
Bilisad cad / Dahab 120.00 €
Blizzard Madow / Jaale
Blizzard Madow / Jaale 120.00 €
Duufaanta Madow / Madow
Duufaanta Madow / Madow 120.00 €
Avalanche Orange / Madoow
Avalanche Orange / Madoow 110.99 € 185.00 €
Avalanche Orange / Buluug
Avalanche Orange / Buluug 185.00 €
Avalanche Blue / Gray
Avalanche Blue / Gray 110.99 € 185.00 €
Avalanche Madoow / Jaale / Jaale
Avalanche Madoow / Jaale / Jaale 185.00 €
Avalanche Caddaan / Cudur
Avalanche Caddaan / Cudur 110.99 € 185.00 €
Avalanche Cadaan / Madow
Avalanche Cadaan / Madow 185.00 €
Cliff Buluug / Casaan
Cliff Buluug / Casaan 120.00 €
Cliff Buluug / Jaale / Jaale
Cliff Buluug / Jaale / Jaale 71.99 € 120.00 €
Cliff Madow / Cagaar
Cliff Madow / Cagaar 120.00 €
Cliff Madoow / Jeegaan
Cliff Madoow / Jeegaan 120.00 €
Cliff Caddaan / Buluug
Cliff Caddaan / Buluug 120.00 €
Vertical Casaan / Gray
Vertical Casaan / Gray 110.99 € 185.00 €
Vertical Mint / Cawl
Vertical Mint / Cawl 185.00 €
Vertical Mint / Madoow
Vertical Mint / Madoow 110.99 € 185.00 €
Vertical Madow / buluug
Vertical Madow / buluug 185.00 €
Vertical Madoow / Jaale / Jaale
Vertical Madoow / Jaale / Jaale 185.00 €
Vertical Madoow / Jeegaan
Vertical Madoow / Jeegaan 110.99 € 185.00 €
Vertical White / Red 110.99 € 185.00 €
CARRUURTA QARSOONADA - ADEEGYADA JOOJI
Dabayl Caddaan / Buluug ah
Dabayl Caddaan / Buluug ah 120.00 €
Dabayl Madoow / Cawlan
Dabayl Madoow / Cawlan 120.00 €
Dabayl Madoow / Jiinis
Dabayl Madoow / Jiinis 120.00 €
Duufaanta Cas / Buluug
Duufaanta Cas / Buluug 120.00 €
Duufaano Buluug / Jaale / Jaale ah
Duufaano Buluug / Jaale / Jaale ah 120.00 €
Dabayl Madoow / Cagaaran
Dabayl Madoow / Cagaaran 120.00 €
CAYAARAHA IYO SIIKA IYO MASKAXKA MASKAXDA RAGA IYO DUMARKA
Ku dul dheji googooyeyaasha
POR FREERIDERHAA, JOOJI FREERIDERS.
Waan ku faraxsanahay inaan ka mid nahay Indicom Brands, shirkad moodo indho indhayn ah oo urursata saddex magac oo u gaar ah: The Indian Face®, Hanukeii® iyo Uller®, kan dambe oo ah summad farsamo kooxeed. Uller® wuxuu ku takhasusay naqshadeynta, soo-saarista iyo qaybinta alaabada moodada casriga ah, oo ay ku jiraan maaskaro barafkaiyo waji-barafka looxa oo lagu sameeyay waxqabadka ugu sarreeya. Waa sababtaas tan oo ah www.theindianface. waxaad helaysaa muraayadaha indhaha oo noocyo kala duwan ah Uller® tayada ugu fiican ee aad haysatid. Dhammaan qeexitaannada farsamo ee muraayadaha indhaha barafka iyo maaskaro barafka ayaa lagu heli karaa sharraxaadda urur kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaan kuu sheegi karnaa inaan hayno moodooyin badan oo muraayadaha indhaha lagu sawiro, muraayadaha indhaha oo leh muraayadaha indhaha oo isweydaarsan kara, iyo sidoo kale muraayadaha indhaha. polarla saaray, iyadoo loo eegayo helitaanka ururinta kasta ee keydkeena.
FARSAMADA SARE EE XIRFADLAYAASHA IYO XIRFADLAYAASHA
Sanadihii la soo dhaafay, Uller® lagu caleemo saaray kooxda dhexdeeda inay tahay astaanteena ugu qiimaha badan, oo leh waxqabadka ugu sarreeya qaybtiisa. Xaqiiqdii, dhammaan muraayadaha barafka ee sumadda Uller® in aan ku soo bandhigno www.theindianface.com Waxaa lagu abuuray khibrad ciyaartooy ah oo iyagu marka hore fahma baahiyaha loo yaqaan 'skiers' iyo 'snowboarders'. Tani waxay ka dhigan tahay inay yihiin maaskaro barafka lagu farsameeyo oo ay sameeyeen freeriderhaa, dadka kale freeriders, had iyo jeer isku dayaya inuu dhaafo waxa laga filayo mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydeena xirfadeed iyo kuwa xirfadlayaasha ah. Xaqiiqdii, waxaan si isdaba joog ah u tijaabinnaa tayada waji-barafkayaga, sanadba sanadka ka dambeeya, waxaan soo aruurineynaa dhammaan xogta si aan u horumarino wax ka beddelka ku habboon, illaa aan ka kulanno oo aan ka sare marinno baahiyaha kuwa ugu culus ee wadayaasha ah iyo kuwa xorriyadda leh.
Wada-hawlgalayaashayada ganacsiga waxay hubiyaan inaad dooratay muraayadaha indhahaUller® waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican. Waad ku mahadsan tahay tiknoolajiyaddeeda casriga ah, waxaan awood u leenahay inaan soo bandhigno qeexitaan aan la dhaafi karin iyo heer cad oo aan laga adkaan karin dhammaan cayaartooyda ku kalsoon alaabadayada. Muraayadahayada 'Tech High' Performance optics X-POLAR Waxay ku daraan midab cajiib ah oo ka duwan mid kasta oo ka mid ah muraayadaha indhaha iyo muraayadaha indhaha. Xaqiiqdii, caddaynta weyn ee muraayadaha indhaha barafkeennu waxay kordhisaa kala-duwanaanta iyo daacadnimada midabada nagu hareeraysan markaan ku tababbarayno cayaaraha barafka. In sidan, maaskaro barafka Uller® Bixiya fiiqista si ka fiican caadiga xitaa xaaladaha ugu xun.
Summad ahaan, yoolkeennu had iyo jeer wuxuu ahaa inaan bixino waxa ugu fiican Muraayadaha indhahasuuqa, ha ahaadaan muraayadaha indhaha ee sawir-qaadaha ama sheybbada birlabta ee birlabta loo beddeli karo, ama si fudud ookiyaale polarla saaray, sida ku xusan ururinta kasta. Sidaa awgeed, muraayadaha indhaha oo dhan waxay hagaajinayaan aragtida deegaanka iyo gargaarka raaxada iyo xasilloonida baraf kasta.
QIIMAHA UGU FIICAN LACAGTA
Noocyada maaskaro barafka ee aad ka hesho websaydhkeennu waxay ku kala duwan yihiin cabbir ahaan, midab ahaan iyo qaab ahaanba, laakiin mid kasta oo ka mid ah wuxuu bixiyaa tayada ugu sarraysa iyo cimri dherer. Waxaan bixinaa fursado badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah moodooyinka muraayadaha indhaha. polarMuraayadaha barafka lagu dhejiyo, muraayadaha indhaha lagu beddeli karo ee birlabta iyo muraayadaha indhaha oo leh lenses sawir qaade ah, iyo sidoo kale muraayadaha indhaha ee carruurta, waxay kuxirantahay helitaanka keydkeena, oo loo abuuray naqshad Unisex iyo waxqabadka ugu sareeya ee suuqa. Intaa waxaa dheer, waxaan bixinnaa moodelladayada muraayadaha barafkaUller® xilliyo qiimo jaban ku leh bartayada barafka laga baxo. Waxaan uqaadaneynaa daqiiqadani inaan kugu casumno inaad fiiriso qeybtaan, oo aad sooqabato dalabyada barafka ee ugufiican. Haddii qaybta barafka ay ku siiso inaadan ka helin midka kuugu habboon xilligaas gaarka ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso inta ka hartay ururintayada maaskaro barafka laga helo websaydhkeenna, qaybtaas weyn.
Tayada iyo waxqabadka sare ee moodooyinkayaga muraayadaha indhaha ee sawir qaadaha, muraayadaha muraayadaha indhaha, muraayadaha indhaha la isku weydaarsado iyo muraayadaha indhaha polarizadas waxay astaanteena ka dhex dhigtay noocyada ugu fiican ee muraayadaha indhaha ee barafka ee suuqa sida ku cad shuraakadayada ganacsiga, gaar ahaan heerkayaga tayada / qiimaha. Ka mid ah muraayadaha indhaha ee baaxada leh waxaan soo saarnay aruurinta muraayadaha indhaha ee sawir qaadista iyo sidoo kale muraayadaha indhaha polarwaxay kor u qaadaysaa is-waafajinta heerka iftiinka jira, oo leh kala duwanaansho u dhexeeya CAT1. ilaa CAT3. Dhinaca kale, waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan bixinno qaar ka mid ah moodooyinka muraayadaha indhaha lagu beddelo ee magnetic lens-ka, taas oo u oggolaanaysa mootada inuu dhaqso u beddelo muraayadaha oo uu u doorto qaybta uu u baahan yahay iyadoo loo eegayo cimilada iyo xaaladaha iftiinka maalintaas.
FAA’IIDOOYINKA BADAN IYO MUUJIYADA KAGA YIMAADA MEESHA LAGU DOORTO
Ka mid ah dhammaan faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin muraayadaha indhaha Uller®, kuwaas oo aan yareyn, waxaan iftiimin karnaa waxyaabaha soo socda:
Muraayadaha barafka lagu socdo ee barafka lagu gado oo leh fudeyd iyo raaxada ugu badan.
Naqshadeynta iyo cabbirka ragga iyo dumarka.
Tiknoolaji X-POLAR iyadoo loo adeegsanayo ilaalinta UV-400 iyo laba lakab oo loo yaqaan 'AntiFog' lakab laba-geesood ah si looga hortago qulqulka.
Nidaamka hawo-qaadashada gudaha ee ka-hortagga uumiga.
Xarafka anti-Slip string xargaha loogu talagalay hagaajinta qumman ee muraayadaha indhaha koofiyadda.
Frame oo ka sameysan polyurethane-ka thermoplastic ee nalkiisu badan yahay.
Qaar ka mid ah muraayadaha indhaha barafka waxaa ka mid ah muraayadaha indhaha ee la is weydaarsan karo. Moodooyinkaani waxay la yimaadaan hal galaas maalmaha qoraxdu ku jirto ee CAT.3 iyo mid ka fududna maalmaha muuqaalka hoose ee CAT.1.
Qaar badan oo ka mid ah moodelkeennu waxay ku hoos yimaadaan qaybta muraayadaha indhaha polarla saaray, mahadsanid polarookiyaalihiisa kor u qaadaya.
Muraayadahayada barafka waxay la socdaan dabool microfiber iyo istiikarada ay ku jiraan iyo, in badan oo iyaga ka mid ah, oo leh dabool adag oo dheeri ah si aad si badbaado leh ugu kaydiso.
Mararka qaarkood waxaan ku bilaabaynaa aruurinta maaskaro barafka lagu ciyaaro qiimo aad u qiimo badan oo ku saabsan bartayada barafka laga baxo.
SOO SAARKA BARNAAMIJYADA, BULSHADA SII.
Dukaankayaga internetka waxaad si joogto ah uga heshaa dalabyo baraf badan oo badan oo ka mid ah moodelkeenna muraayadaha indhaha iyo maaskaro barafka. Iyo waxa ugu fiican ayaa ah in kooxdeena iibinta ay si xilliyo ah u cusbooneysiiyaan barta baraha internetka boggeena marka xilliga iibka barafka uu bilaabmo. Gudaha The Indian Face® iyo UllerLove waxaan jecel nahay naqshadeynta iyo soo saarista maaskaro barafkaloogu talo galay wadayaasha iyo freeriders ka Spain iyo adduunka oo dhan. Xaqiiqdii, dhammaan muraayadaha indhaha ee laga helo websaydhkeenna iyo sidoo kale bartayada barafka waxaa lagu dhiirrigeliyaa dabeecadda, waxqabadka, tacaburka iyo asxaabta… Marka aannu baraf sameyno waxaan dareemeynaa nolol, waan nool nahay.
CAYAARAHA IYO MAASKA MAASKA EE RAGGA
Boggeena www.theindianface.com waxaan ku faaneynaa inaan soo bandhigno alaab Uller®, nooca farsamada ee kooxda moodada indhaha Indicom Brands, oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista iyo qeybinta masaska barafka iyo muraayadaha indhaha polarHoused Premium nin. Sababtaas awgeed, muraayadaha indhaha ragga oo dhan iyo muraayadaha barafka ee ragga waxaa abuuray oo loogu talagalay freeriders oo leh waxqabadka farsamada ugu sareysa, had iyo jeer raadinaya ciyaartooy caan ah, xirfadlayaal iyo xirfadlayaal semi-xirfadlayaal ah, si ay u gaaraan waxqabadkooda ugu sareeya markay ku dhaqmayaan isboortiga.
Muraayadaha muraayadda barafka ee ragga waxay ku habboon yihiin daryeelka daryeelka aragtida mootada ee xaaladaha ugu daran inta lagu jiro tababarka Freeride. Dhamaan maaskaro barafka ragga Uller® laga heli karo websaydhadeena waxaa laga abuuray baahiyaha kooxdayada freeriders, oo ubaahan ugu badnaan sheyga, qalab ahaan iyo raaxeysi labadaba. Waxaan ku faanaa nafteenna xilli kasta inaan karti u yeelano oo aan soo bandhigno noocyo ka sii wanaagsan oo horumarsan oo ka mid ah muraayadaha indhaha iyo muraayadaha indhaha. polarnin fuushan
UllerWaa summad isboorti isboorti oo ay abuurtay oo loogu talagalay kuwa ugu caansan ciyaaraha. Uller, ka mid ah alaabada kale, waxay soo saartaa qaar maaskaro barafkakuwaas oo leh waxqabadka farsamada ugu sareeya. Sidaa darteed, waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh oo muraayadaha indhaha ragga iyo maaskaro ah, oo loogu talagalay oo loogu talagalay freeriders, laguna soo saaray qalabka ugu fiican suuqa. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu damaanad qaadayaa waxqabadka ugu wanaagsan iyo kalsoonida ugu badan ee xaaladaha ugu daran inta lagu jiro barafka iyo xoreynta.
Mararka qaarkood, waxaan cusbooneysiineynaa aruurinta maaskarada barafka si aan u siino alaabada ugu fiican qaybtaan. Qaar ka mid ah ururintayada waxaa ka mid ah muraayadaha muraayadda ragga ee sawir qaadaha, kuwa kale waxay bixiyaan muraayadaha indhaha polarrag fuulay iyo, xitaa, inbadan oo ka mid ah uruurintayada ayaa isku hallayn kara muraayadaha muraayadaha indhaha muraayadaha isweydaarsiga nin. Si kastaba ha noqotee, faahfaahinta nooc kasta oo gaar ah oo laga heli karo websaydhkeennu had iyo jeer wuxuu ku xirnaan doonaa qoraalkayaga maaskaro barafka ee sannadkaas, iyo helitaanka keydkeenna.
Waxaan xaqiijineynaa in dhamaan raggayaga shaashadda barafka ay leeyihiin sharaxaad aan ku qeexno astaamaha muraayadaha indhaha. Sidan oo kale, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in dhammaan muraayadaha indhaha ee raggayagu ay yihiin kuwo heer sare ah, haddana dhammaan ururintayadu ma wada yeeshaan faa'iidooyin isku mid ah. Sidaa darteed, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sifiican ufiiriso tilmaamaha aan kaga tagi karno badeecad kasta dukaankeena internetka, si aad si sax ah u dooran kartid maaskaro barafka si sax ah u qanciya baahiyahaaga sidii skier.
Haddii aan ka fikirno faa'iidooyinka ay bixiyaan muraayadaha indhaha ragga UllerWhich, oo aan yareyn, mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa inay bixiyaan teknoolojiyadda ugu horumarsan ee laydhka adduunka ku jirta qaybteeda. Waxaan ka hadleynaa Tech High Performance optics X-POLAR, taas oo ku jirta inta badan noocyada muraayadaha indhaha ee ragga ee laga heli karo websaydhkayaga, sida ku cad tilmaamaha iyo helitaanka ururinta kasta. Dhab ahaan tan, oo ay weheliso tayadeena ugufiican ee qalabka iyo wax soosaarka, iyo qeybinta iyo gaarsiinta adeegga, waa waxa runti ka dhigaya muraayadaha indhaha ragga. Uller® noocyada kale ee hadda laga heli karo suuqa. Sidoo kale, sida aan ku sameyno The Indian Face®, UllerAlso sidoo kale waa sumad adeegsanaysa farsamooyinka horumarinta ee joogtada ah, sidaa darteedna, waxay xilliyada qaar casriyeysaa dhammaan alaabteeda iyo adeegyadeeda si ay had iyo jeer u ahaato heerka ciyaartooy caan ah.
Teknolojiyada optics X-Polar oo ka mid ah muraayadaha indhaha ee ragga ayaa si sax ah tusaale ugu ah raadintaas si aan had iyo goor u sii fiicnaano. Xaqiiqdii, maaskaro astaanta ragga Uller® tiknoolajiyadda muraayadaha indhaha X-Polar, Soo bandhig fiiqnaan weyn oo kordhinaysa kala-duwanaanta iyo aaminka midabka. Muraayadaha barafka la dhaho polarnin la saaray, iyo sidoo kale ma polarkor u qaadday, waxay leeyihiin faa'iidadan gaarka ah, taas oo hagaajinaysa aragtida deegaanka iyo gargaarka. Muraayadahayada barafka ee ragga sawir qaadaha, raggayaga muraayadaha indhaha lagu beddeli karo muraayadaha indhaha iyo, guud ahaan, dhamaan muraayadaha indhaha oo dhan, waxay bixiyaan qeexitaan wanaagsan iyo hufnaan ka sarreysa heerka caadiga ah, oo bixiya farqiga iyo midabka cajiibka ah.
Xusuusnow inaad wax iibsan karto muraayadaha barafka tayada ugu sareysa ee qeybta barafka barashada ragga oo aad kaheli karto dalabyada barafka ragga ee kaa yaabin doona.
QAYBTA SU'AALAHA BADAN
Ma yihiin maaskaro barafka ragga ee sumadda Uller® Miyey si fiican u habboonaan doonaan madaxayga iyo koofiyaddayda?
Runtii, muraayadaha indhaha ee ragga oo dhami waxay leeyihiin suun laastik ah oo la hagaajin karo dhammaan noocyada madaxa iyo koofiyadda. Xaqiiqdii, uruurintayada badan ee muraayadaha indhaha ee ragga waxay leeyihiin cajalad ka hortag ah si loo hubiyo in si adag loo xajinayo madaxaaga iyo derbiyada koofiyadda, si looga hortago dhaqdhaqaaqa iyo barakaca. Xusuusnow inay muhiim tahay inaad iibsato maaskaro barafka ragga oo cabirkeedu sax yahay isla markaana leh taam ku habboon tan iyo, adoo tixgelinaya doorsoomahan isbeddelka aad ku dooratay muraayadaha indhaha raggaaga, waxaad ka fogaanaysaa inaad hesho iftiin ka muuqda dhinacyada iyo hoosta. Dabcan, sidoo kale waa muhiim in muraayadaha aad dooratid ay leeyihiin tiknoolajiyad casri ah si muraayadaha indhaha ee raggaagu ay ula qabsadaan si sax ah xaaladaha cimilada adiguna wax dhibaato ah kala kulmi meysid marka aad la macaamileyso cimilada xun isla markaana ilaaliso raaxada dhammaan jeer.
Sidee u yihiin muraayadaha muraayadaha indhaha ee muraayadaha indhaha Uller®?
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga Uller® waxaa laga heli karaa dukaankeena internetka https://theindianface.com/pages/gafas-de-esqui-snowboard-uller iyo qaybta galka ragga ee gudaha www.theindianface.com Waxaan ku soo saarnaa iyaga waxyaabaha ugu fiican si aan u gaarno iska caabin weyn iyo adkeyn ka dhan ah saameynta, iyo sidoo kale difaac weyn oo ka dhan ah shucaaca ultraviolet iyo tayada ugu fiican ee suuragalka ah ee aragtidaada. Sidan oo kale, waji barafkeenna polarMuraayadaha barafka ee ragga, iyo sidoo kale muraayadaha muraayadaha muraayadaha la isku waydaarsan karo ee ragga oo kale iyo muraayadaha muraayadaha sawirada ee ragga waa kuwo aad u raaxo badan, adkaysi iyo iftiin leh, waxayna bixiyaan raaxo ka badan kuwa kale ee muraayadaha indhaha ee suuqa.
Miyuu ninka calaamaduhu maaskaro u eg yahay? Uller® ma haystaan ​​farsamada antifog?
Xaqiiqdii, muraayadaha muraayadda ee ragga, oo ay ku jiraan noocyadeenna muraayadaha indhaha ee sawir-qaadaha ragga iyo muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga ee is-beddelka leh waxay leeyihiin nidaam hawo-ka-hortagga hawo-mareenka, kaas oo ku guuleysta dib-u-habeyn hawo joogto ah oo horumar leh si loo damaanad qaado aragtida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah mar walba.
Miyaan ka heli karaa dalabyo muraayadaha indhaha ragga Uller® bogga internetka ee The Indian Face?
Mararka qaarkood waxaan ku bilownaa dalabyada barafka ragga iyo dallacsiinta gaarka ah ee maaskaro barafka ragga ee websaydhka. Caadi ahaan waxaad kaheleysaa alaabooyin noocyo kala duwan ah The Indian FaceIyo summad Uller® ku jira barafka laga baxo nin, oo ay ku jiraan muraayadaha indhaha ee ragga, waxay kuxirantahay helitaanka keydkeena iyo waqtiga sanadka.
Maxaan tixgeliyaa markaan iibsanayo muraayadaha indhaha ragga / muraayadaha indhaha ee ragga?
Markii aad iibsaneysid weji-barafka ragga ama muraayadaha indhaha barafka ragga waa inaad:
Si fiican u fiiri qaybta miiraha ee muraayadaha muraayadaha raggaagu leeyihiin iyo haddii ay suurtogal u tahay inay beddelaan iyo in kale. Waxa ugu fiican ee lagugula talin karaa waa inaad yeelato muraayadaha indhaha birta ee birlabta ah ee ragga oo aad ku dooran karto qaybta muraayadaha aad isticmaali doontid iyadoo kuxiran maalinta, waqtiga iyo xaaladaha cimilada ee aad u hoggaansameyso. Ikhtiyaar kale ayaa ah in la doorto muraayadaha muraayadda sawir ee ragga ee ku kala duwan CAT1. iyo CAT 3, kuwaas oo ah kuwa ugu isticmaalka badan.
Doorashada maaskaro barafka lagu ciyaaro polarMuraayada ragga ama muraayadda barafka ee ragga oo ku habboon koofiyadaha barafka iyo barafka.
Xaqiiji in muraayaddaha barafka ee raggaagu leeyihiin cajalad ay kujiraan nidaam anti-silsilad ah si loo hubiyo in si adag loo qabsado derbiyada koofiyadda lagana hortago dhaqdhaqaaqooda iyo qaxooda. Xusuusnow in cadaadiska ay tahay inaad dareento inuu noqdo mid sax ah, oo aan aad u adkeyn ama aan aad u dabacsaneyn.
Waa inaad doorataa looxyada Unisex oo aan aad u weyneyn ama aad u yar. Iyada oo muraayadda barafka ee raggaadu xiran yihiin, hubi muuqaalka muuqaalka ah ee aad ku hesho adigoo u jeeda dhinac iyo kor / hoos. Haddii aad ogaato inaad aragti gaabis ah leedahay, maaskaradaas ayaa laga yaabaa inay aad u yar tahay. Muraayadaha barafka ee ragga oo leh looxyo unisex ayaa ah xulashada ugu fiican.
Waxaa jira maaskaro barafka lagu rido oo leh shaandho polarla saaray, markaa ikhtiyaar kale oo wanaagsan ayaa ah in la doorto muraayado barafka lagu gado polarragga kor u taagay haddii aad rabto inaad ka hesho faa iidadan oo aad baabi'iso milicsiga iftiinka ay qorraxdu u keeni karto marka ay barafka garaacdo.
Waa inaad hubisaa in muraayadaha indhaha ee raggaadu leeyihiin nidaam ka hortagga ceeryaanta. Uller(Iib ah oo laga heli karo https://theindianface.com/pages/gafas-de-esqui-snowboard-uller) waxay bixisaa moodooyin ay muraayadaha indhahoodu leeyihiin lakab laba jibbaaraya buundada kuleylka sidaasna looga fogaado ceeryaanta iyo uumiga, taasoo kuu oggolaaneysa inaad leedahay hufnaan buuxda intaad ku baraareyso xaalad kasta oo cimilo ah.
Had iyo jeer ka fikir raaxadaada iyo inaad yeelato muuqaal wanaagsan markaad soo iibsaneyso muraayadaha indhaha ragga.
Xullo muraayadaha muraayadda ragga ee midabkeedu ku habboon yahay qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada.
Ka faa'iideyso qeybta barafka ragga si aad ugu iibsato muraayadaha tayada ugu sareysa leh dalabyada barafka ragga.
Maxaa ku jira muraayadayda barafka magnetic lenses man of the brand Uller®?
Sanduuq kasta iyo kiis kasta oo ka mid ah muraayadaha muraayadaha laysku waydaarsado ee raggayagu waxay la socdaan waxyaabaha soo socda:
Ninka maaskaro ee duufaanka Uller®.
2 muraayadaha indhaha: 1 qorrax iyo mid aragti hooseeya.
Kiis qaadid adag.
Daboolka dabacsan ee microfiber.
Waa maxay astaamaha aasaasiga ah ee ay leeyihiin ragga muraayadaha indhaha ee ugu fiican?
Muraayadaha barafka ee ugu wanaagsan ragga waxay bixiyaan dammaanad tayo. Waa lagama maarmaan in daboolka barafka raggaaga ay leeyihiin damaanad qaadka tayada Midowga Yurub oo leh calaamadda CE.
Saamaynta walxaha u adkaysta nabadgelyada weyn markaad baraneyso ciyaaraha barafka. Qalab adkaysi u leh sida kuwa aan ugu isticmaalno muraayadaha indhaha iyo wejiga wajiga ragga Uller®, waxay bixisaa heerka ugu sarreeya ee nabadgelyada iyo, sidaas darteed, wadarta nabadda ee maskaxda markaad ku tababbarayso cayaaraha barafka aad ugu jeceshahay. Fikrad ahaan, xijaabka barafka raggaagu sidoo kale waa inuu lahaadaa xoojin aagga macbudyada iyo qalooca sanka si looga ilaaliyo ilaalinta meelaha xasaasiga ah.
Kahortaga UV - 400. Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga waa inay awoodaan inay ka ilaaliyaan aragtidaada maalmaha qoraxdu jirto, iyo xitaa kuwa daruuraha leh, ee falaaraha falaadhaha cadceedda.
Sii aragtida guud. Xusuusnow in barafku u baahan yahay aragti ballaaran oo aragti ah si loo ogaado barafleyda xawaare sare ku socda ee ku teedsan aagagga, iyo sidoo kale waxyaabaha buuraha laga buuxiyo iyo noocyada kale ee shilalka ama astaamaha juqraafiyeed.
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee raggaaga waa inay ahaadaan kuwo ballaadhan si ay kuugu oggolaadaan inaad yeelato aragti wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, muraayadaha indhaha ee muraayadaha indhaha ee ragga waa inay lahaadaan kala duwanaansho midab wanaagsan iyo fiiqan, haddii kale hoos uma dhicineysid geesaha xaaladaha ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Diyaar ma u tahay inaad iibsato labbadaada dambe ee muraayadaha indhaha / muraayadaha indhaha ragga? Xusuusnow in aan si isdaba joog ah u tijaabinno alaabteena si tayo leh oo aan u ururinno dhammaan xogta, sannadba sanadka ka dambeeya, si aan u awood ugu yeelano horumarinta isbedelada ku habboon ee muraayadaha indhaha ragga, illaa aan ka haqabtirno baahida kuwa ugu baahida badan wadayaasha. Waxaan shaki ku jirin in our ski goggles nin Waxay yihiin 100% alaabooyin heer sare ah. Bal naftaada u fiirso faa iidooyinka uruurintayada barafka barafka leh, oo waxaad ku ogaataa raggayaga waaweyn dalabyada barafka ee qeybta barafka ragga ee degelkeenna!
DUMARKA DAMIIRKA EE DUMARKA IYO MASKAASKA
En The Indian Face waxaan haynaa badeecooyin kala duwan Uller®, nooca farsamada ee kooxda moodada indhaha isboorti-caadi ah Indicom Brands. Waxaan ku hanweynahay weyn oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo badan maaskaro barafka dumarkaoo leh faa'iidooyin sare dhammaan dhagaystayaasha haweenka ah. Dhab ahaan, Uller® wuxuu ku takhasusay naqshadeynta, soo-saarka iyo qaybinta kuwa ugu fiican maaskaro baraf naag iyo ninsuuqa maanta.
Sida laga soo xigtay la-hawlgalayaashayada ganacsiga, barta www.theindianface.com waxaad ka heli doontaa alaabada casriga ah ee ugu fiican isboortiga barafka, oo loogu talagalay in lagu qanciyo baahida ugu badan ee ciyaartoydeena, rag iyo dumarba. Sidaa darteed, iyaga dhexdooda waxaan ku darnaa xulasho ballaaran oo ah muraayadaha indhaha ee haweenka oo leh iskudhaf weyn oo midabyo iyo qaabab ah. Sida ku cad helitaankooda keydkeena, qaar badan oo ka mid ah moodooyinka ski goggles naagWaxaa laga heli karaa boggayaga internetka sidoo kale waxaad ka heli kartaa qaybtayada barashada barafka ee haweenka, taas oo aan ku bilaabi doonno deeqaha barafka haweenka si xilli-xilli ah iyadoo loo eegayo waqtiga sanadka.
Haddii aad ku dhiirratid inaad ogaatid, qiyaas ahaan, sida muraayadaha indhaha ee barafka ee laga heli karo dukaankeenna internetka, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhriska! Waa kuwan liiska tayada ugu muhiimsan ee lagu garto muraayadaha indhaha ee haweenka:
Muraayadahayada barafka ee haweenkeennu waxay inta badan leeyihiin cabir iyo moodeel 'Unisex' ah. Sidan oo kale, waxay u isticmaali karaan dumarka iyo sidoo kale ragga. Waxaan leenahay moodooyin waaweyn iyo kuwa yaryar, kuwaas oo ay doortaan rag iyo dumarba iyadoo lagu saleynayo dookhooda.
Mararka qaarkood, waxay kuxirantahay helitaanka keydkeena, waxaan bixinaa aruurinta muraayadaha indhaha birlabbada dumarka ee birlabadaha si fudud wax looga badalo dhowr ilbiriqsi. Uruurintaan muraayadaha indhaha ee haweenka waxay la yimaadaan 2 lenses oo ay ku jiraan: 1 maalmaha qoraxdu ku jirto CAT.3 iyo mid kale, oo cad, maalmaha muuqaalka hoose ee CAT.1.
Marka la eego helitaankayaga, waxaan sidoo kale bixinnaa aruurinta waji-barafka dumarka leh muraayadaha indhaha ee tikniyoolajiyadda. X-POLAR iyo laba lakab lakabka laba lakab Caan-diid(anti fog), oo ka celisa muraayadaha indhaha barafka ee haweenka inay ku soo baxaan.
Maaskaro maaskaro ee dumarka, oo ay ku jiraan muraayadaha indhaha polarMuraayadaha barafka ee haweenka, iyo muraayadaha indhaha ee sawir qaade ee haweenka ayaa la socda ilaalinta UV-400 ee muraayadaha oo dhan.
Dhammaan aruurintayada muraayadda barafka ee dumarka waxay leeyihiin hawo hawo gudaha ah oo leh anti-uumiga. Tani waxay u oggolaaneysaa dib-u-habeynta hawo ee haweenka dhexdooda maaskaro barafka, waxayna dammaanad qaadaysaa aragtida ugu fiican.
Dhammaan muraayadaha indhaha ee haweenkeenna waxaa ka mid ah cajalad aan siibiil ahayn (Xarig ka-hortagga loogu talagalay hagaajinta saxda ah ee maaskaro barafka dumarka / maaskaro barafka dumarka leh koofiyado cabbirkoodu kala duwan yahay.
Muraayadahayada barafka ee haweenkeenu waxay leeyihiin qaab ka samaysan polyurethane aad u fudud oo heerkulbeegga leh.
Dhammaan muraayadaha indhaha ee haweenka, haddii ay yihiin muraayadaha indhaha polarDumarka kor loo taagay, sida haddii ay yihiin muraayadaha indhaha ee sawir-qaadaha dumarka ah, ama muraayadaha indhaha ee is-beddelka muraayadaha haweenka, waxaa ku jira daboolka microfiber iyo istiikarada lagu daray.
Waxaan cusbooneysiineynaa ururintayada waji-barafka dumarka si joogto ah si aan u siino alaabada ugu fiican qaybtaas. Qaar ka mid ah ururintayada waxaa ka mid ah muraayadaha indhaha polarHaweenka, kuwa kale waxay bixiyaan muraayadaha indhaha barafka dumarka ee sawir qaade, xitaa xitaa inbadan oo ka mid ah aruurintayada waxay noqon karaan muraayadaha indhaha ee birlabta oo la isweydaarsan karo. Faahfaahinta nooc kasta oo gaar ah had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa jaangooynta maaskaro barafka dumarka ee sanadkaas, iyo helitaanka keydkeenna.
Haddii aad rabto inaad si faahfaahsan u ogaato sida wajiga barafka dumarkayagu yahay, waxaan xaqiijinaynaa in qaab kasta uu leeyahay sharraxaad aan ku qeexno astaamaha lagu sheegay ski goggles naag. Sidan oo kale, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in dhammaan muraayadaha indhaha barafka ee haweenkeennu ay yihiin kuwo heer sare ah oo heer sare ah, haddana dhammaan ururintayada ma wadaagaan faa'iidooyin isku mid ah. Sababtaas awgeed, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sifiican ufiiriso tilmaamaha shey kasta ee dukaankeenna internetka, si aad si sax ah u dooran karto wejiga shaashadda ragga ee sida saxda ah u daboolaya baahiyahaaga sidii mootada.
Bixintayada alaabooyinka iyo maaskaro barafka badanaa way kala duwan yihiin. Xaqiiqdii, sidaan horay u soo sheegnay, marka loo eego uruurinta kala duwan ee laga heli karo bogga internetka ee The Indian FaceWaxaad ka heli kartaa muraayadaha indhaha ee sawir-qaadaha ee haweenka oo ka bilaabma qaybta 1 illaa 3, ama ururinta muraayadaha birlabyada ah ee haweenka ee birlab, oo ay ku jiraan laba muraayadaha indhaha, mid ka mid ah nooc kasta oo la soo sheegay.
Sidii aan kor ku soo sharaxnay, waxaan ku xasuusinaynaa inaan ku hayno ururintayada moodooyin aan la tirin karin oo kala duwan iyo midabbo kala duwan ah oo ku habboon dookha ragga iyo dumarka. Sidaa darteed, dhammaan noocyada muraayadaha indhaha ee haweenka iyo ski goggles naag marca UllerAlso sidoo kale waa unisex sidaa darteedna, qaabeynta iyo soosaariddooda waxaa looga fikiraa si ay ula jaan qaadi karaan oo ay ula jaan qaadi karaan ragga iyo dumarka. Haddii aad rabto inaad ka iibsato shey ka mid ah ururintayada maaskaro barafka dumarkamarca UllerSafely si ammaan ah ayaad ku dhex sameyn kartaa www.theindianface.com. Intaas waxaa sii dheer, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad gasho qeybtayada barafka haweenka oo aad ku raaxeysatid dhammaan qiimo dhimista, dallacsiinta iyo dalabyada barafka dumarka ee aan adiga kuu hayno.
Sidee u yahay nidaamka iibsiga khadka tooska ah ee muraayadaha indhaha ee barafka dumarkawww.theindianface.com?
Nidaamka iibsiga khadka tooska ah ee loogu talagalay gabdhaheena barafka barafka ee haweenka waa mid aad u dhakhso badan, raaxo leh oo fudud, sida ay tahay kiiska alaabada inteeda kale ee laga heli karo boggayaga internetka. Mar alla markii aad gujiso qaybta oo aad doorato maaskaro barafka haweenka ee aad rabto inaad iibsato, waxaad si fudud ugu dari kartaa gaadhigaaga wax iibsiga oo ay la socdaan macluumaadkaaga rarka. Waxyaabaha soo socdaa waxay noqon doonaan in lagu bixiyo muraayadda barafka ee wax ku ool ah oo nabadgelyo leh iyada oo loo marayo albaabkeenna lacag bixinta oo leh shahaadada SSL Waqtiga dhalmada ee maaskaro barafka dumarka waxay ku xirnaan doontaa waddanka maraakiibta laga qaado.
Miyaan ka heli karaa moodellada muraayadaha indhaha ee isku-beddelka magnetic ee ku yaal bogga internetka ee The Indian Face?
Mararka qaarkood waxaan ka bilaabaynaa aruurinta shabakadeena muraayadaha muraayadaha indhaha muraayadaha indhaha in aan u diyaarino dhamaan ciyaartoydeena iyo Ruuxyada Hindida ah. Si kastaba ha noqotee, helitaankeedu wuxuu si toos ah ugu xiran yahay keydkeena. Xusuusnow in noocan oo kale ah muraayadaha indhaha ee barafka ay leeyihiin 2 lenses, mid maalmaha qorraxdu jirto iyo mid kale oo ah maalmaha aragga oo hooseeya. Muraayadaha muraayadaha indhaha ee birlab-wadareedka birlab ee haweenka ee laga helo websaydhkayagu waxay u oggolaanayaan is-beddelka muraayadaha indhaha oo fudud oo ka yar 2 ilbidhiqsi.
Miyaan ka heli karaa moodellada muraayadaha indhaha barafka dumarka ee bogga internetka ee The Indian Face?
Waxaan si joogto ah u daabacnaa uruurinta photokromic ski muraayadaha dumarkaboggeena internetka, oo ay heli karaan dhamaan ciyaartoydeena iyo Ruuxyada Hindida ah. Waxaan xaqiijinaynaa in helitaankeedu uu si toos ah ugu xiran yahay keydkeena. Xusuusnow in muraayadaha indhaha nalagu sawiro polarHoists waxay la qabsadaan iftiimintooda xaaladaha cimilada kala duwan. Dhammaan muraayadaha indhaha ee sawir-qaadaha ee sawir-qaadaha ayaa ka beddelan CAT.1 illaa CAT.3. Waad ku mahadsan tahay sida ay u kala duwan yihiin, muraayadaha indhaha ee sawir-qaadaha ee haweenka ayaa ku siin doona waxqabad aad u sarreeya labadaba maalmaha qorraxda iyo maalmaha xaaladaha cimilada xun.
Miyaan heli karaa moodello ookiyaalo baraf ah polarnaag kacsan webka The Indian Face?
Waxaan si joogto ah u soo bandhignaa moodooyinka muraayadaha indhaha lagu ciyaaro polarnaag kacsan webka The Indian FaceDhammaan waxay kuxirantahay helitaanka keydkeena iyo aruurinta aan bilaabi doono sanadkaas. Sidoo kale, waxaad heli kartaa qaar ka mid ah moodooyinka muraayadaha indhaha polarDumarka ayaa kor u qaadaya qiimaha dhimista ee qaybta barafka haweenka tan iyo, inta lagu jiro xilliyada iibka, dhammaan waji-xidhka leh deeqaha barafka ee dumarka ayaa laga heli karaa macaamiisheenna qaybtaas.
Sidee buu yahay nidaamka hawo-qaadashada gudaha ee astaanta astaanta u ah haweenka barafka wata? Uller®?
Maaskaro barafka dumarka UllerLeeyihiin hawo hawo-u-ururin hawo oo ku habboon dib u soo celinta hawada si tartiib tartiib ah. Muraayadahayada barafka ee haweenkeennu waxay dammaanad ka qaadaan hawo goor kasta inta lagu jiro barashada isboortiga. Intaa waxaa dheer, muraayadaha indhaha ee barafka ayaa bixiya muuqaalka ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee cayaartoyda xirfadleyda ah iyo freeriders way nabad qabaan inta ay ku guda jiraan waxqabadkooda buuraha.
Ma muraayadaha indhaha ee haweenka UllerHel koofiyaddu ma is waafajin kartaa?
Runtii, nashqadaha noo ah maaskaro barafka dumarkaWaxaa loogu talagalay inay la jaan qaadaan koofiyadaha barafka iyo barafka. Xaqiiqdii, cajaladda ka-hortagga warqadda ee maaskaro barafka haweeney de Uller® waxaa loogu talagalay inay bixiso isku xirnaan kuwan ka mid ah ski goggles naag koofiyadda. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u qaabeynaa dhammaan noocyadeenna habka ugu macquulsan, annaga oo tixgelinayna sida ugu habboon ee koofiyadaha ugu badan ee suuqa yaalla. Waxaad u isticmaali kartaa labada qalab ee muhiimka u ah ilaalinta madaxaaga isla mar.
Waxaan had iyo jeer dooranay inaan bixinno ski goggles naagleh iska caabinta ugu sareysa iyo adkeysiga ka dhanka ah saameynta, ilaalinta ugu fiican ee ka hortagga shucaaca qoraxda, iyo heerka ugu sarreeya ee muuqaalka iyo muuqaalka. Gudaha The Indian Face Waxaan ku faraxsanahay inaan u diyaarinayno barafleyda aruurinta aruurinta badan ski goggles naagkuwaas oo loogu talagalay inay ka difaacaan xaaladaha cimilada ugu xun ee ay ka heli karaan buuraha, qorraxda, tusaale ahaan, roob, ceeryaamo, dabayl. Waxyaabaha ay ski goggles naagin aan ku darno ururintayada waxaa loogu talagalay in ay awood u yeelato in ay u adkeysato isbedelka cimilada iyo jug kasta ama dhicitaan si looga gaashaanto ilaalinta ugu badan dalabaadkaas Xusuusnow in mid kasta oo ka mid ah moodeelladayada ah ski goggles naag marca UllerThem Waxaad ka heli kartaa qaybtayada barashada barafka haweenka ee websaydhkayaga, halkaas oo aad ka heli karto waxyaabaha ugu fiican ee xilliyada barafka dumarka.